05 January 2018 - 15:27
Image: AFP Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa (R) shakes hands with the leader of the Movement for Democratic Change (MDC), the country's main opposition party, Morgan Tsvangirai (L), who has been battling cancer, during a visit at his home in Harare on January 5, 2018.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa made a home visit on Friday to the leader of the country’s main opposition party, Morgan Tsvangirai, who has been battling cancer.
The visit came as Zimbabwe’s political parties prepare to begin campaigning for elections due later this year — the first since former president Robert Mugabe stood down following a brief military takeover.
Mnangagwa, who was accompanied by his deputy Constantino Chiwenga, the former army chief who led November’s takeover, said Tsvangirai was “recuperating very well” following his colon cancer diagnosis two years ago.
Tsvangirai’s deputy in the opposition Movement for Democratic Change (MDC) party Nelson Chamisa said that Mnangagwa’s gesture was “the politics we want to see“.
“The politics of peace, the politics of working together, the politics of caring for each other,” he said.
Tsvangirai won the most votes in the first-round of the 2008 presidential election in which he faced off against Mugabe — but it was not enough to avoid a run-off against Mugabe.